Sexual Dysfunctions: Types, antony, soritr'aretina, ary Treatments
Aogositra 15, 2015
Sexual levitra, na dia tena fahita, dia lohahevitra izay ny ankamaroan'ny olona, ​​na dia tsy menatra miresaka momba ny. Alohan'ny miresaka momba ny firaisana ara-nofo olana, dia zava-dehibe ny mahafantatra ny momba ny firaisana ara-nofo valin-tsingerin'ny. Ny firaisana ara-nofo valin-tsingerin'ny dia efa-phased andiana fiovana ara-batana sy ara-pihetsehampo izay hitranga avy amin'ny firaisana ara-nofo arousal ny firaisana. Ny sequential dingana efatra ireo: fifaliana, Plateau, levitra, sy ny vahaolana. Sexual dysfunctions, noho izany, ny firaisana ara-nofo olana izay mitranga mandritra akory va ny endriny samy hafa isehoan'ny ny firaisana ara-nofo sy ny tsingerin'ny valin hisorohana fahombiazana ny firaisana ara-nofo afa-po avy amin'ny firaisana ara-nofo-mahaliana asa, toy ny filahiana sy ny firaisana. Sexual dysfunctions fiantraikany lehibe na lehilahy na vehivavy, nefa dia fahita matetika eo amin'ny vehivavy noho ny lehilahy. Ankamaroan'ny toe-javatra ny firaisana ara-nofo dia azo tsaboina tsara dysfunctions.
Karazam-ara-nofo eo amin'ny vehivavy Dysfunctions
Misy fototra efatra dysfunctions firaisana ara-nofo izay mahazatra kokoa amin'ny vehivavy. Ireo dia:
Tsy nahasakana na ambany faniriana ara-nofo: Izany no ambany fotsiny libido na ny tsy fisian'ny faniriana hanao firaisana. Tsy maintsy ho vokatry ny ara-nofo sy / na ara-pitsaboana mahatonga ny firaisana ara-nofo dysfunctions.
Sexual arousal aretina: Izany mitranga raha misy vehivavy lasa mamanala sy tsy afaka mamaly na hatao taitra akory stimulations firaisana ara-nofo.
Tsy fahampian'ny firaisana ara-nofo matetika fara tampony: Izany no raha misy vehivavy tsy mahavita foana hanatratra orgasms, mitarika amin 'izany ny fahasorenana amin'ny firaisana ara-nofo.
maharary firaisana: Indraindray vokatry ny fivaviana dryness ary ny sasany firaisana toerana.
Karazam-ara-nofo Dysfunctions in Men
Low libido na ny tsy fisian'ny faniriana hanao firaisana.
Erectile dysfunctions - tsy fahafahany hanatratra ny fananganana na hihazonana iray.
Teraka tsy tonga volana ejaculations na ny tsy fahafahany ejaculate mandritra ny firaisana ara-nofo.
Mahatonga ny Sexual Dysfunctions Ny mahatonga ny firaisana ara-nofo dia azo dysfunctions antokony roa: ny ara-batana na ara-pitsaboana antony, ary ny ara-tsaina antony. Ny antony ara-pitsaboana sy ara-batana dia:
Side vokatry ny fanafody
Voa sy ny aty aretina
mitsahatra amin'ny fananahana
Ny antony ara-tsaina dia tahaka ny vokatry ny ankapobeny korontana ny saina. Ny sasany amin'izy ireo dia:
Over-misaina sy ny fanahiana
Soritr'aretin'ny Dysfunctions ara-nofo eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy
Ny soritr'aretina ny firaisana ara-nofo dysfunctions dia miasa ny karazana ny aretina eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, toy ny: ambany na tsy eo fanirianao hanao firaisana, tsy fahafahany manana na foana mandritra ny firaisana ara-nofo arousal asa, tsy fahafahany miaina ny levitra, fanaintainana mandritra ny firaisana ara-nofo, olana amin'ny fanatanterahako tsirinaina, ary ny olana nahazo na mitoetra mahitsy.
Miaty filazalazana ny Sexual Dysfunctions
Misy lehibe roa miaty filazalazana ny firaisana ara-nofo dysfunctions:
Ny ara-tsaina fanombanana atao amin'ny alalan'ny mpitsabo voaofana mifototra amin'ny fanadihadiana mikasika ny firaisana ara-nofo vokatry ny tantara sy ny olana ara-nofo amin'izao fotoana izao, raha ny lohavaniana fanadinana dia matetika atao amin'ny toe-javatra izay ny levitra manana antony antony ara-pitsaboana toy ny poizim ny fivavia- sela, ary nihena ny hoditra fihenjanan'ny resaoro.
Fitsaboana ny ara-nofo Dysfunctions
Open firaisana ara-nofo ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa eo amin'ny lohahevitra.
Mampitombo tairina ny miezaka tapaka vaovao sy ny toerana, manaitaitra fampiasana fitaovana toy ny horonan-tsary, boky, fitaovana, sns. ary tena filahiana.
Manamaivana maharary toy ny fanaintainana toerana dia afaka hanaisotra ny sitrako ny asa.
fialana amin'ny alikaola, fihinanana be loatra ny zava-mahadomelina, sy ny fifohana sigara.
Rehefa mifandray araka ny tokony ho amin'ny adin-tsaina, toe-po nitaredretra, fahaketrahana sy ny tebiteby.
Mampahery tsy coital fihetsika toy ny firaisana amin'ny vava, filahiana, sns.
Mitady torohevitra avy nampiofanina mpitsabo momba ny foto-kevitra.
Fialam-boly sy ny fialan-tsasatra ampy.
Misy zava-mahadomelina toy ny Viagra, Levitra sy Levitra koa azo ampiasaina ho amin'ny fitsaboana ny sasany amin'ny olona ara-nofo dysfunctions. Izy ireo na aiza na aiza misy mora fa mitaky doctorat levitra.
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny "Sexual Dysfunctions: Types, antony, soritr'aretina, ary Treatments"
Leave a comment Cancel valin-	Ny adiresy mailaka dia tsy ho namoaka.CommentName *
Debit karatra Hijery hafa dia haingana lasa fitaovana amin 'ny safidy ho an'ny borrowers-tserasera sy ny lenders. Ny fifadian-kanina, izany…
10 Jobs Fa Nizeriana izay te-Travel Round The World
Stay Mifandray!	FollowaskIroyin